Pyridine waa Cufnaanta 0.978 g / cm3. Farriinta 68 ° F. Bukaanadu way ka culus yihiin hawada. Sun ku ah sunta iyo neefsiga. Gubashada waxay soo saartaa qiiqa sunta ah ee nitrogen.
Pyridine waa dareer cad oo leh ur kaafi ah oo la isku daro, saliid, iyo kalluun. Waxaa laga samayn karaa dhuxul dhuxusha ama kiimiko kale. Pyridine waxaa loo isticmaalaa in lagu kala diro walxo kale. Waxa kale oo loo isticmaalaa in lagu sameeyo alaabooyin kala duwan sida dawooyinka, fitamiinada, cuntada dhadhanka, rinjiyeynta, maadooyinka, alaabta dharka, waxyaalaha la isku qurxiyo, sunta cayayaanka, iyo herbicides. Pyridine ayaa sidoo kale laga dhigi karaa burburka alaabta dabiiciga ah ee bii'ada.
Muuji dhammaan 10 natiijooyinka